Fampiharana fanamarihana tsara indrindra amin'ny Android | Androidsis
Fampiharana fanamarihana tsara indrindra amin'ny Android
Ny fananana finday avo lenta finday dia nitondra tombony be dia be ho antsika saingy tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra dia ny mamela antsika mandray an-tsoratra na oviana na oviana, na aiza na aiza, noho izany dia tsy mila mitondra penina sy taratasy intsony isika hamenoana ny lisitry ny fiantsenana, manoratra ny lohatenin'ny boky na manoratra an'io hevitra lehibe vao noforoninay vao hanoratra ny lahatsoratra manaraka io.
Mitondra antsika hatrany ny finday avo lenta miaraka amintsika ka, raha mbola misy bateria sisa tavela dia hanana ny fahaizana mandray naoty izahay. Fa mazava ho azy, ho an'ity, ho fanampin'ny terminal dia mila fampiharana mety isika izay ahafahantsika manoratra haingana sy mahita mora foana izay rehetra ilaintsika. Ao amin'ny Play Store dia misy fampiharana marobe isan-karazany natao manokana ho an'ity, koa raha mbola tsy nifidy na inona na inona ianao na mieritreritra ny hiova dia ho hitantsika ny sasany Fampiharana fanamarihana tsara indrindra amin'ny Android.
1 Google foana
4 Fanamarihana ara-pitaovana
5 Fanamarihana Omni
Tsy misy isalasalana, iray amin'ireo fampiharana mandray fanamarihana be mpitia indrindra amin'ny Android ny Google Keep. Miaraka amin'ny interface tsara be loko amin'ny endriny Material Design, mampiseho amintsika ireo naoty toy ny karatra ireo, toy izany koa mora ny mihetsika eo anelanelan'izy ireo ary safidio.
Ao amin'ny Google Keep ianao dia afaka mamorona fanamarihana lisitry ny raha-hatao, fanamarihana am-peo izay handefasan'ny Google Keep ho anao, hametraka fampahatsiahivana, hanisy marika amin'ny marika mba ho mora kokoa ny mahita izay tadiavinao, mizara naoty amin'ny olon-kafa na zarao amin'ny fianakaviana ary maro hafa. Manolotra ny fanohanana Android Wear sy ny fampidirana Google Drive koa izy io. Ary raha tena ilaina ny naoty dia azonao atao ny mampifikitra azy eo ambony mba hahitana azy tsara.
Ny tolo-kevitr'i Microsoft handraisana naoty dia tena feno ihany koa, indrindra fa taorian'ny fanavaozana vao haingana. Toy ny Google Keep momba ny Google Drive, Ny Note iray dia miharo amin'ny Drive iray ary manolotra asa maro samihafa: mifanentana sy fampifanarahana eo amin'ny sehatra, mifanentana amin'ny Android Wear, fahaizana mizara naoty amin'ireo mpampiasa hafa, mametraka lisitry ny lahasa, manampy naoty audio, sary, rohy, horonan-tsary ... Ao amin'ny OneNote, ny naotinao rehetra dia nalamina tamina kahie, fizarana, takelaka ary labels.
Raha ny marina, ny OneNote an'i Microsoft dia mahery vaika ary manasongadina izany Tsy atolotra ho an'ireo izay te hanana rindranasa tsotra ahafahan'izy ireo manoratra ny zavatra isan'andro.
OneNote: Tehirizo ireo hevitra ary mandamina naoty
Ny fampiharana elefanta dia hatrizay iray amin'ireo fampiharana mandray naoty matanjaka indrindra any, indrindra ho an'ny sehatry ny matihanina. Serivisy feno endri-javatra izy io: karazana naoty isan-karazany, fiaraha-miasa, fanamarihana, fisehon'ny fandaminana, ary motera fikarohana mahery vaika afaka mitady lahatsoratra na dia amin'ny sary aza. Ary koa, hazo fijaliana izy io, ny safidinao maimaimpoana dia mametra ny fampiasana amin'ny fitaovana roa fotsiny, satria tsy maintsy vonona ny handoa famandrihana ianao raha te hanana ny mety rehetra ananany.
Material Notes dia fampiharana manolotra a famolavolana sy firafitra mitovy amin'ny Google Keep miaraka amina naoty misy loko isan-karazany amin'ny endrika karatra, na izany aza, tsy toy ny tolo-kevitr'i Google, tsy manome mihoatra noho izany, widget, safidy hiarovana amin'ny PIN na fahaizana manondrana sy manafatra naoty. Raha ny tadiavinao dia ny fahatsoran'ny fananana fampiharana ho an'ny fanamarihana haingana sy haingana fotsiny, Fanamarihana ara-pitaovana Mety ho safidy tsara izany.
Fanamarihana ara-materialy: naoty miloko
Fanamarihana Omni fampiharana hafa mandray naoty ity tena tsotra nefa feno ary miaraka amina interface interface Material. Voalamina mitsangana ny fanamarihanao ary manana ny fahaizana manambatra naoty, manasokajy ary mikaroka izy, ary koa ireo widgets ary maody fanoratana an-tsary izay ahafahanao manintona ny sarinao. Azonao atao koa mizara naoty, apetaho ny sary, naoty audio ary rakitra hafa, manome sokajy sy tag ho an'ny fandaminana tsara kokoa, mamorona lisitry ny raha hatao, mamorona hitsin-dalana ho an'ny naoty eo amin'ny efijery an-trano, manondrana / manafatra naoty ary tolotra fampidirana amin'ny Google Now.
Fanamarihana Omni Safidy mahery vaika io miaraka amina fiasa maro nefa tsy feno tahaka ny OneNote, mba hahafahantsika mametraka azy io amin'ny dingana antonony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana fanamarihana tsara indrindra amin'ny Android
Caam dia hoy izy:
Tsy hita ny ColorNote, fampiharana tsara dia tsara. Tsy ampy fotsiny ny antsipirian'ny fahaizana manampy sary amin'ny naoty.
Valiny tamin'i Caam
Amboary maimaim-poana miaraka amin'ny Timbre ho an'ny Android ny audios sy ny horonan-tsarinao